चीन कुकुर पप ब्याग कारखाना र निर्माताहरु | रडार
बायोडिग्रेडेबल पीएलए क्लि W र्याप
कुकुर पप झोला
१००% बायोडिग्रेडेबल र कम्पोस्टेबल, वास्तविक पर्यावरण-मैत्री, वातावरणलाई कुनै हानी छैन, १2० दिन भित्र पूर्ण रूपमा H2O र CO2 लाई औद्योगिक कम्पोष्टि facilities सुविधामा गिराउन सकिन्छ।
बायोडिग्रेडेबल पीएलए डग पोप बैग
२cm सेमी * .5 33.cm सेमी १ mic माइक्रोन
घरपालुवा जनावर सफा
२cm सेमी * .5 33.। सेमी
१ mic माइक्रोन
१ रंग १ साइड प्रिन्टिंग
A: १००% बायोडिग्रेडेबल र कम्पोस्टेबल, वास्तविक इको-मैत्री, पर्यावरणलाई कुनै नोक्सान छैन, पूर्ण रूपमा एचमा डिग्रेड गर्न सकिन्छ।2O र CO2 १ comp० दिन भित्र औद्योगिक कम्पोस्टिंग सुविधाहरू।
B: उपयोग: भान्साको उपयोग। माइक्रोवेभ तताउने, फ्रिजको खाना संरक्षण, ताजा र पकाएको खाना प्याकेजि and र अन्य अवसरहरू व्यापक रूपमा घरेलु, सुपरमार्केट, होटल र औद्योगिक खाद्य प्याकेजिaging क्षेत्रमा प्रयोग गरिन्छ।
सी: सेवा: तैयार उत्पादनहरूको लागि, हामी आपूर्ति गर्छौं दीर्घकालीन योजनाहरू ग्राहकले पाएको कुनै प्रतिक्रियालाई प्रतिक्रिया गर्दछ; परिमार्जित सामग्रीको लागि, हामी उत्पादनको सफलता सुनिश्चित गर्न बिक्री-पश्चात टेक्नोलोजी सेवा प्रदान गर्दछौं।
A, गुणवत्ता आश्वासन：
हामीसँग कच्चा मालबाट तयार उत्पादहरूसम्म हाम्रो सामूहिक वस्तुहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पेशेवर QA प्रणाली छ।
बी, उन्नत टेक्नोलोजी:
निर्माणको क्रममा टेक्नोलोजीमा सुधार गर्नुहोस्, हामी उच्च गुणस्तरको पीएलए फिल्महरू उत्पादन गर्न सक्छौं;
सी, व्यावसायिक टीम:
हामीले १० भन्दा बढी वर्षको लागि PLA सम्बन्धित उत्पादनहरूमा विशेषज्ञता प्राप्त गर्‍यौं, कच्चा माल परिमार्जन गर्न, समाप्त PLA उत्पादनहरू उत्पादन गर्न, हाम्रा उत्पादनहरूलाई उच्च-स्तरको गुणस्तर र प्रकार्य राख्न। टेक्निसियन टोलीबाट बिक्री टोलीमा, हामी उत्कृष्ट-अनुकूलित बायोडिग्रेडेबल प्रदान गर्न समर्पित छौं। विभिन्न उद्योगहरूमा सबै ग्राहकहरूको समाधान।
हामीसँग हाम्रा उत्पादनहरूका लागि सम्बन्धित प्रमाणपत्रहरू छन्, हाम्रा उत्पादनहरूको सुरक्षा प्रमाणित गर्नका साथै हाम्रो ईमानदारी देखाउन, जस्तै एफडीए, EN13432, ASTM D6400, BPI, आदि।
यो १००% कम्पोस्टेबलले के भन्न खोजेको हो?
१००% कम्पोस्टेबलको मतलब PLA उत्पादनहरू पूर्ण नवीकरणीय छन्। यो मोनोमर र पोलीमरमा फिर्ता रूपान्तरण गर्न सकिन्छ, वा, यसलाई पानी, कार्बन डाइअक्साइड र जैविक सामग्रीमा बायोडिग्रेड गर्न सकिन्छ। PLA नियमित पेट्रोलियमले बनेको प्लास्टिक भन्दा धेरै दिगो हुन्छ।
पूर्ण रूपमा कम्पोस्ट PLA उत्पादनहरू लिनको लागि कति समय लाग्छ?
सामान्यतया, PLA पूर्ण रूपमा कम्पोस्ट कम्पोस्ट कम्पोस्ट करीव करीव -०-4545 दिनमा। घर कम्पोस्टिंग बिनमा तिनीहरूले अधिक लिन सक्दछन्।
PLA मेरो रद्दी टोकरीमा खाद सक्छ?
PLA उत्पादनहरु लाई कम्पोस्ट को लागी केहि मात्रा को तातो, नमी र हावा को आवश्यकता छ। अफसोसपूर्ण तरीकाले खास ल्यान्डफिलहरूले यी आवश्यक परिस्थितिहरू समावेश गर्दैनन् र रद्दीटोकरीमा फालिएको वस्तुहरू यी ल्यान्डफिल्समा सामान्यतया समाप्त हुन्छन्। साथै, ल्यान्डफिलहरू सामान्य रूपमा मोहर गरिन्छ जसको मतलब सतहको मुनबाट बिघटन हुन्छ र रद्दीटोकरीमा फ्याँकिएको चीजलाई दशकौंसम्म सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
PLA को लागी भण्डारण आवश्यकताहरू के हुन्?
PLA प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशको बाहिर र ठंडी, सुख्खा स्थानमा राख्नुपर्दछ। PLA उत्पादनहरू ११० डिग्री (F) को तापक्रम र सबै समयमा 90 ०% आर्द्रता मुनि राख्नुहोस्।
यातायातको बखत म कसरी PLA उत्पादनहरू ह्यान्डल गर्ने?
PLA उत्पादनहरू चिसो, सुक्खा ठाउँहरूमा राख्नुहोस् जुन तापमान ११० डिग्री (एफ) भन्दा बढि हुँदैन। आवश्यक नभए पनि, फ्रिजमा ट्रक पीएलए उत्पादनहरू ढुवानी गर्न अत्यधिक सिफारिस गरिन्छ।
के म तातो पेय पदार्थहरूको लागि PLA उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, यदि पेय पदार्थ तापमान ११० डिग्री (F) भन्दा बढि छैन। PLA उत्पादनहरू राम्रो प्रदर्शन गर्दछन् चिसो पेय पदार्थको साथ प्रयोग गर्दा पनि PLA उत्पादनहरूको सामान्य तापक्रम सहिष्णुता ११० डिग्री (एफ) हो। हामीसँग तातो प्रतिरोधी सीपीएलए कफी कपको ढक्कन छ कागज कपसँग मिल्छ जुन तातो पेय पदार्थहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
नियमित प्लास्टिक उत्पादनहरूको तुलनामा PLA को औसत लागत कति छ?
औसत लागत ब्रान्ड, प्रकार, र अर्डरको आकारमा निर्भर गर्दछ। अझै नियमित प्लास्टिक उत्पादनको तुलनामा लागत अधिक प्रतिस्पर्धी हुँदै गइरहेको छ जैव उत्पादनयोग्य उत्पादनमा चासो बढ्यो। मुल्यहरुमा असमानता १ 15 +% को बारे मा छ।
के PLA उत्पादनहरू खान सुरक्षित छ?
PLA उत्पादनहरु खाद्य छैन अझै सामान्यतया गैर विषैले। पीएलए को साना टुक्रा सम्भवतः गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्र्याक्ट मार्फत हानिरहित पार हुनेछ। एक पटक जठरांत्र मार्गको माध्यम भएर यो स्टूलमा निर्मूल हुनेछ। यदि दुखाइ वा असुविधा उत्पन्न भयो भने कृपया डाक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस्।
मलाई मकैबाट एलर्जी छ; के म अझै पीएलए उत्पादनहरू प्रयोग गर्न सक्छु?
हो, मकैबाट स्टार्च निकाल्ने प्रक्रियामा प्रयोग गरिएको तातोले इम्यूनोलोजिकली रि reacक्टिभ प्रोफिलीनलाई नष्ट गर्दछ। प्रोफिलिन एक रसायन हो जुन सामान्यतया एलर्जीको प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्दछ र पीएलए उत्पादनहरूमा फेला पर्दैन।
अघिल्लो: कागज कटलरी
अर्को: किचेन रद्दी टोकरी
बायोडिग्रेडेबल डग पोप बैगहरू
बायोडिग्रेडेबल डग्गी पोप ब्यागहरू
कम्पोस्टेबल डग पोप बैग
कम्पोस्टेबल डग्गी पोप ब्यागहरू
इको क्लिंग र्याप चिनी र्‍याप, बायोडिग्रेडेबल कम्पोस्टेबल रद्दी टोकरी, कम्पोस्टेबल ब्यागहरू, बायोडिग्रेडेबल क्लि W र्याप, कम्पोस्टेबल फोहोर ब्यागहरू, बायोडिग्रेडेबल स्ट्रेच फिल्म,